सेभिलका महापुरूषहरू, यसको सडकहरूको उत्पत्तिदेखि पेद्रो एल् क्रुएल यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | संस्कृति, sevilla
Sevila संस्कृति प्रेमीहरूको लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो, अन्तहीन बाहेक योजना तपाईं शहर मा गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूका कथाहरू र किंवदन्तीहरू जति धेरै सुन्दर र आश्चर्यजनक छन्। नोट गर्नुहोस् कि यसको उत्पत्ति कम्तिमा रोमी शहरको पछाडि जान्छ Hispalis द्वारा स्थापित जूलियस सिजर ईसापूर्व १ शताब्दीमा
यदि यो पर्याप्त थिएन भने, अन्डालुसियाली शहरले मध्यकालीन समयमा ठूलो बलको आनन्द उठायो, जब यसलाई क्यासटेलियन कुलीनहरूले पुनः कब्जा गरेपछि पुनः कब्जा गरियो। फर्डिनान्ड III सेन्ट १२1248 मा। र अझै अधिक यो समयमा अस्ट्रिया, जब यो नयाँ विश्व र स्पेनिश साम्राज्यको आर्थिक केन्द्रको साथ पहिलो वाणिज्यिक बन्दरगाह भयो। यस्तो समृद्ध ईतिहासले असंख्य पौराणिक कथाहरूलाई जन्म दिनुपर्दछ। यसैले, यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने सेभिलका किंवदन्तीहरू, हामी तपाईंलाई केही सब भन्दा चाखलाग्दो चीजहरू बताउन जाँदैछौं।
1 सुन्दर सुसुनाको कथा
2 डोआ मारिया कोरोनेल र उम्लने तेल
3 राजा पेद्रो प्रथम का टाउको, सेभिलको किंवदन्तीहरुमा एक प्रमुख व्यक्तित्व
4 ढु stone्गा मानिस
5 पिल्लेको इतिहास, सेभिलको किंवदन्ती बीच एक क्लासिक
6 Calle Sierpes को दंतकथा
सुन्दर सुसुनाको कथा
शहरको हिंस्रक विगत यो कथामा देखा पर्दछ जुन सेभिलका पौराणिक कथाको अंश हो। मध्य युगमा, सेभिलको यहूदी क्वार्टरमा आक्रमण भएको थियो र यसको जवाफमा यहूदीहरूले शहरको नियन्त्रण प्राप्त गर्न मोरोसको साथ षड्यन्त्र रचे।
योजनालाई व्यवस्थित गर्न तिनीहरू बैंकरको घरमा भेला भए डिएगो सुसन, जसको छोरी क्षेत्रभरि उनको सुन्दरताको लागि प्रसिद्ध थियो। यो भनिन्थ्यो सुसाना बेन सुसान र उनले एक जवान इसाई भद्र मानिससँग गोप्य सम्बन्ध राखेका थिए।
यो षडयन्त्र उसको घरमा राखिएको हुनाले उनलाई थाहा थियो कि यो के हुन्छ। यो योजना शहरका मुख्य कुलीनहरूलाई मार्ने योजना थियो। अनि उनी, उनको प्रेमीको जीवनको लागि डरले, उसलाई के भएको बताउँछिन्। उनले महसुस गरेनन् कि त्यसो गरेर उसले आफ्नो परिवार र सबै सेभिलियन यहूदीहरूलाई जोखिममा पार्छ।
भद्र पुरुषले षड्यन्त्रका अधिकारीहरुलाई चेताउनी दिन धेरै समय लिएन, जसले सुसोनाका बाबु लगायत षड्यन्त्रका नेताहरुलाई पक्राऊ गर्ने आदेश दिए। उनीहरूलाई केहि दिन भित्र झुण्ड्याइयो तबलाडा, एक स्थान जहाँ शहर मा सबैभन्दा खराब अपराधीहरू मारिए।
सुसेनाले सेभिलको मारिया लुइसा पार्कमा टाइलमा प्रतिनिधित्व गर्छिन्
ती युवतीलाई उनीहरुका देशले अस्वीकार गर्‍यो, जसले उनीलाई देशद्रोही ठान्थे, र उनीसँग सम्बन्ध राख्ने भद्र पुरुषले पनि। र, यहाँबाट लिजेन्डले दुई संस्करणहरू प्रस्ताव गर्दछ। पहिलो अनुसार, उनले क्याथेड्रलको आर्कप्रिस्टलाई मद्दतको लागि सोधे, टोलीडोको रेजिनाल्डो, जसले उनको निर्दोष बन्नुभयो र हस्तक्षेप गर्नुभयो जसले गर्दा उनी एउटा कन्भेन्टमा निवृत्त भए। अर्कोतर्फ, दोस्रो भन्छिन् कि उनका एक बिशपका दुई बच्चा थिए र उनलाई नाकारे पछि उनी सेभिलियन व्यापारीको प्रेमी भइन्।
यद्यपि पौराणिक कथा फेरि अन्तमा एकीकृत भएको छ। जब सुसोनाको मृत्यु भयो, उनको इच्छा खोलियो। उनले भने कि उनी त्यो कामना गर्दछन् उसको टाउको काटिएको थियो र उसलाई आफ्नो घरको ढोकामा राखियो जुन उसको दुर्दशाको प्रमाण हो। तपाईं अझै पनी देख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं मार्फत जानुहुन्छ भने मृत्यु सडक, खप्पर संग टाइल जसमा यो सुसोनाको घर हुने थियो। वास्तवमा त्यो मार्ग केटीको नामबाट पनि चिनिन्छ।
डोआ मारिया कोरोनेल र उम्लने तेल
सेभिलको यस कथामा साबुन ओपेराका धेरै सामग्रीहरू छन्, विशेष गरी प्रेम र बदलाको चाहना। थप रूपमा, यसले हामीलाई शहरको पुनः कब्जाको समयमा लिन्छ। श्रीमती मारिया कोरोनेल उनी कास्टिलियन महिला छोरी थिइन श्री अल्फोन्सो फर्नांडीज कोरोनेल, जो एक समर्थक थियो क्यास्टिलको अल्फोन्स इलेवन। उसले विवाह पनि गर्यो डोन जुआन डे ला सर्डा, जो बारीमा आफ्नो छोराको रक्षक बीच लडाई, हेनरी द्वितीय, जब उनले आफ्नो सौतेनी दाजुभाइको सामना गरे पेड्रो I सिंहासनको उत्तराधिकारको लागि।
यस कारणले गर्दा पछिले डॉन जुआन डे ला सेर्दाको हत्या गरे र उनको सबै सम्पत्ति कब्जा गरे र विधवालाई उजाड पारिदिए। पेद्रो म उसलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिन, तर जब उनले उनलाई देखे, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उनको प्रेममा। यद्यपि डोआ मारिया कोरोनेल आफ्नो पतिलाई मार्ने आदेश दिएका र सेभिलियन सम्मेलनभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्न इच्छुक थिएनन्। स्यान्टाक्लारा.
यतिसम्म पनि उनले पेद्रो आईलाई "क्रूएल" पनि भनिन र उनको रखौटीको रूपमा राख्ने आफ्नो प्रयास त्यागिन्। एक दिनसम्म, उनीसँगै नियम पाएको स्टाकले थकित, उनी कन्भेन्ट भान्छामा छिराइन् र उम्लिरहेको तेल खन्याइएको थियो यसलाई अनुहारमा अनुहार पार गर्नुहोस्। यस तरिकाबाट उनले पेद्रो I लाई एक्लो छोड्ने व्यवस्था गरे।
सान्ता Inés को कन्भेन्ट
उनले अझै पनी उनको सौतेनी भाइ एरिक द्वितीयको हातमा राजाको मृत्यु देख्न पाएका थिए जसले आफ्नो कारणप्रति वफादार रहेकोले कोरोनेल बहिनीहरूले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरे। यसप्रकार, यी दुई महिलाहरू भेट्टाउन सक्षम भए सान्ता Inés को कन्भेन्ट दरबारमा जो उनका पिता थिए। पहिलो Abbess, ठीक, डोआ मारिया कोरोनेल हुन, जो १ 1411११ तिर मरे।
राजा पेद्रो प्रथम का टाउको, सेभिलको किंवदन्तीहरुमा एक प्रमुख व्यक्तित्व
ठीक क्रूर कास्टिलियन राजाले सेभिलका अरू धेरै पौराणिक कथामा तारा .्कन गर्दछन्। उदाहरण को लागी, एक हामी तपाईलाई बयान गर्न जाँदैछौं। शहरभरको उनको एक रातको भीडमा पेद्रोले भेटे Niebla छोरा गणना गर्नुहोस्, समर्थन गर्ने परिवार हेनरी द्वितीय, हामीले तपाईंलाई उनको सौतेनी दाजुलाई भनेको छ। तरवार बाहिर आउन लामो थिएन र क्रूरले अर्को मार्यो।
यद्यपि, द्वंद्व जाग्यो एक बुढा महिला कि उनले बत्तीको साथ बाहिर बाहिर हेरी, र जब उनले हत्यारालाई चिने तब छक्क परे, उनी आफ्नो घरको लागि बन्द गरी, न कि उनी भुईमा लत्याएकी थिई। कपटी पेड्रोले पीडितको परिवारलाई आश्वासन दियो म दोषीको टाउको काट्ने थिएँ उनको मृत्यु र सार्वजनिक मा यो बेनका।
बुढेसकालमा उनीले देखेका थिए भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनले उनलाई बोलाएर अपराधीको पहिचान सोध्न लगाए। ती आइमाईले राजाको अगाडी ऐनामा राखिन् र भनिन्, "तिमी पनि हत्यारा छौ।" त्यसोभए डन पेद्रोको टाउको काटिएको थियो संगमरमरको मूर्ति मध्ये एक कि तिनीहरूले उहाँलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे र उहाँ काठको कोठामा राख्नु भयो। उनले यो आदेश पनि दिए कि त्यो बाकस त्यहि सडकमा छोडियो जहाँ हिंसात्मक घटना भएको थियो, तर यो आफ्नो मृत्यु नभएसम्म खोल्न नहोस्।
आज पनि तपाई सडकमा त्यो बस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, ठीक, राजा डोन पेड्रो को प्रमुख। र यो पौराणिक तथ्यलाई सम्झनको लागि, यसको विपरित दिशा, जहाँ साक्षी बस्छन्, भनिन्छ क्यान्डिल सडक.
राजा डोन पेड्रो को टाउको
ढु stone्गा मानिस
हामी मध्य युगमा सेभिलको यो अर्को पौराणिक कथाको बारेमा कुरा गर्न जारी राख्छौं। यसले भन्छ कि, १ XNUMX औं शताब्दीमा, त्यहाँ थिए एक मधुशाला मा राम्रो अनुहार सडक, को छिमेकको सम्बन्धित San Lorenzo, जहाँ सबै प्रकारका मानिसहरू रोकिए।
त्यसो भए, यो परम्परागत थियो कि जस्तो, धन्य Sacrament, मानिसहरू घुँडा टेकेका थिए। जब पट्टीमा साथीहरूको समूहले उसको सुन्ने गर्‍यो, तिनीहरू बाहिर गए र जुलुसको रूपमा हिंड्दै घुँडा टेकेका थिए। सबै तर एक। कल माटेओएल रुबियो उनी नायक बन्न चाहन्थे र आफ्ना साथीहरूलाई आशिष पाए भनेर आरोप लगाउँदै उनले घुँडा टेक्न नहुने गरी जोडले भने।
ठीक त्यो क्षण मा, एक दिव्य किरण दुर्भाग्य Mateo मा गिर्‍यो उनको शरीरलाई ढु into्गामा परिणत गर्दै। आज पनि तपाईले ब्युन रोस्त्रो सडकमा समयको हिसाबले लगाएको सामग्रीमा मानिसको धड देख्न सक्नुहुन्छ, जुन त्यसबेलादेखि यथार्थ भनिन्छ, ढुone्गा मानिस.
पिल्लेको इतिहास, सेभिलको किंवदन्ती बीच एक क्लासिक
यदि तपाईंले पहिले नै अन्डालिसियन शहरको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ भने, तपाईंलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि कत्ति महत्त्व छ भनेर राम्ररी थाह छ ट्रियाना पपी, नाम जुन उनीहरूले लोकप्रिय बप्तिस्मा लिए म्याद समाप्ति को ख्रीष्ट। हरेक पवित्र हप्ता उसको भाईचारेले उनलाई बासिलिकाबाट जुलुसमा बाहिर लान्छ र यो वातावरण वातावरणले घेरिएको हुन्छ।
यो देखेर हामी छक्क पर्न सक्दैनौं, किनकि सेभिलका कल्पित कथाहरूमध्ये थुप्रै यस पात्रको नायकको रूपमा छन्। सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक एक हो जुन हामी तपाईंलाई तलको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
यसले बताउँछ कि जिप्सी केटाले सटीक नाम दिए पिल्ला बार्कास पुल म हरेक दिन शहरको उपनगर ट्रायणाबाट सेभिल हुँदै जान्छु। एक जना व्यक्तिले उसलाई त्यो यात्रा गरिरहेको देख्यो कि उसलाई शंका लाग्यो ऊ आफ्नै श्रीमतीलाई भेट्न जाँदै थियो। त्यो हो, उनीसँग शारीरिक व्यवहार थियो।
"पप्पी" भनेर चिनिने म्याद समाप्त हुने क्रिष्ट
एक दिन, उसले भिल्ला बिक्रीको छेउमा उनीको लागि कुर्दै रहे र उसलाई सात पटक प्रहार गरे। धेरै मानिसहरू केटाको चिच्याई पुगे र आक्रमणबाट बच्न सकेनन्। ती मध्ये मूर्तिकार पनि थिए फ्रान्सिस्को रुइज गिजान, जो अन्तमा म्याद समाप्त हुने ख्रीष्टको व्यक्तित्वको लेखक हुनेछन्।
यो भनिएको छ कि उनी, त्यस जवान मानिसको पीडाले छक्क परेका थिए, उनी आफ्नो अनुहारबाट प्रख्यात ख्रीष्टको मूर्ति बनाउन प्रेरित थिए। जे होस्, उसले हत्याराको श्रीमतीलाई भेट्न जाँदैन, तर एक बहिनीलाई कि कसैलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको बैठकहरू गोप्य थिए।
Calle Sierpes को दंतकथा
यो केन्द्रीय सडक सेभिलमा सब भन्दा प्रख्यात छ, तर सबै शहरका बासिन्दाहरूलाई यसको नामको कारण थाहा छैन, जुन सेभिल लिजेन्डको कारण पनि हो। तिनीहरू भन्छन कि, १ the औं शताब्दीमा, त्यसबेला के भनिन्थ्यो Espalderos सडक बच्चाहरू कुनै स्पष्ट कारणको लागि हराउन थाले।
तिनीहरूलाई फेरि कहिलै सुन्न पाएनन् र यो नाटकीय अवस्थाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आतंकित बनायो। सेभिलको तत्कालीन रीजेन्ट, अल्फोन्सो डे कार्डेनास, के गर्ने थाहा छैन। एक बन्दीले आफ्नो स्वतन्त्रताको बदलामा रहस्य समाधान गर्न प्रस्ताव गरे सम्म।
युग मेलचोर डि क्विन्टाना उनी राजाको विद्रोहमा सहभागी भएको कारण जेलमा थिए। रिजेन्टेले स्वीकार गर्‍यो र तब दोषी व्यक्तिले उसलाई त्यहाँ भएको ठाउँमा पु led्यायो विशाल सर्प करिब बीस फिट लामो। यसमा ड्यागर थियो र यो मरेको थियो। यो आफैलाई मल्चियर थियो जसले उनको सामना गर्‍यो र उनलाई मार्‍यो।
सर्प वा सर्पलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आश्वासन दिन क्याले एस्पाल्डेरोसमा प्रदर्शन गरिएको थियो। भनिन्छ कि तिनीहरू शहरको सबै छिमेकबाट यो हेर्न आएका थिए र त्यस पछि सडक भनिन्थ्यो सिएरप्सको.
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई सेभिलको सबैभन्दा लोकप्रिय किंवदन्तीहरू देखाएका छौं। त्यहाँ अरू धेरै छन् महान शक्ति को ख्रीष्ट, त्यो सान्ता लिब्राडा वा त्यो संत जस्टा र रुफिना। तर यी कथाहरू अर्को समयको लागि छोडिनेछ। यदि तपाईं शहरमा हुनुहुन्छ भने, रमाईलो गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई छाड्दछौं यो लिंकमा तपाईंले सेभिलबाट गर्न सक्ने भ्रमणहरूको सूची छ यदि तपाईंसँग आसपासको अन्वेषण गर्ने समय छ भने, तपाईंले त्यसलाई पछुताउनु पर्दैन!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » sevilla » सेभिलका महापुरूष